Vaovao - Torohevitra hividianana milina fanoratana / sokitra
Dingana 1: Ny olana voalohany dia ny fanohanana.
Betsaka ny fanafarana mora vidy, avy any Shina ny ankamaroany eny an-tsena. Saingy masera sarotra ny laser ary vaky tokoa izy ireo ary mila amboarina. Hamarino tsara fa azo antoka ny orinasa ividiananao ary manolotra fanampiana tsara ho anao sy ny masinin'izy ireo aorian'ny fividiananao azy.
Ireto misy fanontaniana vitsivitsy tokony hosaintsainina:
Sarotra sa mora inona ny mahazo kojakoja fanoloana?
Manana fanohanana teknolojia ve izy ireo?
Mora ve ny mamaly fanontaniana?
Manana tranokala tsara ve izy ireo?
Misy lesona momba ny fampiasana sy / na fanamboarana ilay masinina?
Azo havaozina ve?
Dingana 2: mifidy milina. Ny habe sy ny hery.
Ny olana roa lehibe hifantohako rehefa miresaka masinina dia ny haben'ny fandriana sy ny herin'ny laser.
Ny haben'ny fandriana ao amin'ny masinina dia hamaritra ny haben'ny fitaovana azonao ampidirina ao amin'ilay milina hanapaka na sokitra. Ny fandriana lehibe kokoa dia hahafahanao manapaka na manisy sombin-javatra lehibe kokoa ary na dia manao zavatra kely aza ianao, toy ny firavaka laser notapahana, ny fandriana lehibe kokoa dia mamela hanapahana sombin-javatra marobe indray mandeha fa tsy indray mandeha. Misy koa ny masinina sasany manana fandriana raikitra ary misy ny manana fandriana afaka miakatra sy midina. Ny fandriana miakatra sy midina dia mamela anao sokitra zavatra samy hafa habe. Tsy miova ny halalin'ny fanapahana fa raha te-hanisy sary famantarana amin'ny kiraro hoditra ianao fa tsy amin'ny sombin-koditra fisaka, dia ilaina ny manana fandriana azonao aidina mba hampidirana ilay kiraro ao anaty masinina.
Ny olana manaraka dia ny herin'ny laser. Ny tanjaky ny laser dia refesina amin'ny Watts. Arakaraky ny maha watt azy no matanjaka kokoa ny laser. Ilay laser, fampiasako azy dia nanomboka tamin'ny laser 30 watt ary nohatsaraina ho 50 watt. Ny tanjaky ny laser no zava-dehibe indrindra amin'ny fanapahana. Tsarovy ny hatevin'ny fitaovana azo tapahina amin'ny laser dia voafaritry ny teboka ivon'ny solomaso fa tsy ny herin'ny laser. Noho izany ny fampidirana laser mahery vaika kokoa dia tsy hamela anao hanapaka fitaovana matevina. Saingy hahafahanao manapaka haingana sy azo antoka kokoa. Ny laser malemy kokoa dia hidika fa manemotra ny laser mba hahafahana manapaka tsara.
Manoro hevitra aho ny hahazo ny milina lehibe indrindra azonao atao ary manomboka amin'ny laser tsy dia malemy kokoa. Ny fandriana lehibe kokoa dia hamela anao hiasa amina endrika lehibe kokoa na hanapaka sy hanisy sokitra maro indray miaraka. Azonao atao ny manatsara ny laser ao aminy ho lasa matanjaka kokoa avy eo.
Fotoana fandefasana: Nov-18-2020